कोरोनाको संकट र लकडाउनपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो! « Kalinchowk Online – Nepal's Leading News Portal
कोरोनाको संकट र लकडाउनपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो!
जम्मा पढिएको : 579
प्रकाशित मिति : १२ असार २०७७, शुक्रबार १९:३२
आत्महत्याको अबस्था भयावह हुँदै भन्ने जस्ता समचार हिजो आज आउन थालेका छन । यस घटनालाई कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ।लकडाउन सुरु भए देखि ७५ दिनसमम्म अबधिमा नेपालमा एक हजार २ सय २७ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउछ। जुन दैनिक सरदर १६ जना पर्न आउँछ । तर आत्महत्या अहिलेको मात्र समस्या भने होइन । नेपालमा पनि आत्महत्या पहिला देखि नै जनस्वास्थ्यको एउटा ठुलो समस्या र चुनौतिका रूपमा देखा पर्दै आएकोछ । नेपालमा आत्महत्या गर्नेको दर प्रत्येक वर्ष ८-१० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५,७५४ जना नेपालीले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका थिए। यसरी हेर्दा नेपालमा प्रत्येक दिन सरदर १६ जना व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ।
प्रकृतिक बिपत्ति पर्दा, रोग ब्याधि फैलिदा जस्ता असहज र जोखिम पुर्ण अबस्थामा मानसिक रोग तथा आत्महत्याको दर बढेर जाने जोखिम भने हुन्छ ।त्यसैले आत्महत्या लकडाउन पछिको मात्र समस्या हो । लकडाउन पछि भयावह भएको छ , पहिले यस्तो थिएन भन्ने बुझाई सरासर गलत हो । लकडाउन भन्दा पहिले र लकडाउन पछिको तुलना गर्ने हो भने खासै फरक देखिदैन। तर बढदै जाने संकेतहरु भने देखा पर्न थालेकाछन ।बालबालिकामा भने यो बिचमा आत्महत्या गर्ने दर बढेर गएको देखिन्छ। जुन दुखद हो । आत्महत्या एकदमै संबेदनसिल बिषय हो ।आत्महत्याको समचारलाई अतिरन्जित र सनसनी पुर्ण बनाउनु हुदैन । यसले समाजमा झनै नकारात्मक असर पुर्‍याउछ। डिप्रेसनमा रहेका र आत्महत्याको सोच बनाएकाहरुमा आत्महत्या गर्ने आँट बढछ । बालबालिकाहरुले त्यसको सिको गर्न सक्छन् ।
आत्महत्या नेपालको मात्र समस्या पनि होइन । यो बिश्वकै साझा समस्या हो।विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक जनाले आत्माहत्या गर्छ भने प्रत्येक ३ सेकेण्डमा १ जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गर्दछ । एक आत्महत्या हुँदा पच्चिस व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गरिसकेका हुन्छन् र धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न गम्भिर रूपमा सोचेका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष बिश्वमा सरदर ८ – १० लाख व्यक्तिले आत्महत्याबाट आफ्नो ज्यान गुमाउने गरेका छन । यो संख्या युद्ध, दैवी प्रकोप, सडक दुर्घटना, महामारी लगायतका कारणहरूबाट हुने मृत्यु भन्दा धेरै हो । विश्वमा महिलाको तुलनामा पुरुषहरुले बढि आत्माहत्या गर्ने गर्छन । तर आत्महत्याको प्रयास भने पुरुषमा भन्दा महिलामा बढि देखिन्छ ।
व्यक्तिले आत्महत्या आफ्नो ब्यक्तिगत कमजोरीका कारण गर्ने नभएर आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा अन्य जोखिमका तत्त्वहरूको संयुक्त प्रभावका कारण हुने गर्दछ ।धेरै जस्तो केशमा आत्महत्याको प्रयास वा आत्महत्यालाई मानसिक रोगको एउटा लक्षणको रूपमा लिनुपर्दछ ।जसरी कुनै कुनै शारीरिक रोगमा केही ब्यक्तिहरु उच्च जोखिमा हुन्छ । त्यसै गरि केही ब्यक्तिहरु मानसिक रोग र आत्महत्याको हिसाबले केहि उच्च जोखिममा हुन सक्छन ।
जीवन रहे आफूले गरेको सबै गल्तीहरू सच्याउन सकिन्छ । गल्तीको प्रायश्चित गर्न सकिन्छ । तर आफ्नो अस्तित्व नै नास भएपछि आफूले गरेको अमूल्य जीवन त्याग्ने भुललाई प्रायश्चित गर्ने मौका समेत पाइदैन ।आत्महत्या समस्याको समाधान हुँदै होइन र आत्महत्यालाई धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ ।